ဘေးကျပ်နံကျပ်မေးခွန်းမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါ အဖြေကောင်းတစ်ခုထွက်ဖို့ အတွေးခေါ်တွေက စကားပြော – Trend.com.mm
ဘေးကျပ်နံကျပ်မေးခွန်းမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါ အဖြေကောင်းတစ်ခုထွက်ဖို့ အတွေးခေါ်တွေက စကားပြော
Posted on May 22, 2018 by Wint
အလုပ်အင်တာဗျုးတစ်ခုမှာ ကျွန်တော့်ကို ဥာဏ်စမ်းမေးခွန်းတစ်ခု မေးတယ်။ တော်တော်လေး ဖြေရခက်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ။
မုန်တိုင်းထန်တဲ့တစ်နေ့မှာ မင်းကားမောင်းသွားနေရင်း လူသုံးယောက် ကားမှတ်တိုင်မှာ
မတ်တပ်ရပ်နေတာကို တွေ့မယ်။ ပထမတစ်ယောက်က အရမ်းလှတဲ့ မိန်းကလေး ။
ဒုတိယတစ်ယောက်က မင်းအသက်ကိုတစ်ခါကယ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းဟောင်း။
တတိယတစ်ယောက်ကတော့ နေမကောင်းတဲ့ အဘွားအိုကြီးတစ်ယောက်။
မင်းရဲ့ကားကလည်း လူတစ်ယောက်ပဲထပ်တင်လို့ရတော့မယ်။ ဘယ်သူ့ကို မင်းကားပေါ်
ဒီအင်တာဗျူးမေးခွန်းဟာ ကိုယ့်ကျင့်တရားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဘေးကျပ်နံကျပ်မေးခွန်းမျိုးပါ။ စာဖတ်သူတို့ဆိုရင်ရော ဘယ်သူ့ကိုရွေးမှာလဲ ?
အဘွားအိုကို ရွေးသင့်တယ်လို့ထင်လား… အဘွားက တော်တော်လည်းနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်။ သူမကိုအရင်ဆုံး ကယ်သင့်တယ်လို့မထင်ဘူးလား ?
သူငယ်ချင်းဟောင်းကိုရော …. လူ့ဘဝကြီးမှာဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ မင်းကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီး ကျေးဇူးမဆပ်ချင်ဘူးလား ?
ဒီရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုကြောင့် မိန်းမလှလေးကို မင်းထားခဲ့ရတော့မှာ သေချာသွားပြီ။
သူကတော့ ရိုးရိုးလေးပဲဖြေလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို ကားသော့ပေးပြီး အဘွားကိုဆေးရုံလိုက်ပို့ခိုင်းလိုက်မယ်။ မိန်းမလှလေးနဲ့အတူ ကျွန်တော်ကားမှတ်တိုင်မှာ အတူစောင့်ပေးနေလိက်မှာပေါ့တဲ့။ သူ့အဖြေက အင်တာဗျုးသူတွေကို စိတ်ကျေနပ်စေခဲ့တယ်။
ဒီမေးခွန်းနဲ့အဖြေလေးဟာ လူတော်တော်များများဆီကို ပျံနှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ အဖြေပေး
လိုက်တဲ့ လူရဲ့ဥာဏ်ရည်ကိုလည်း သဘောကျသွားကြတယ်။
” လူတိုင်းဟာ အောင်မြင်နိုင်ဖို့ ကိုယ်စီ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ မွေးဖွားလာကြတာပါ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လည်း အရည်ချင်းတွေဖန်တီးနိုင်ပါတယ် ”
ကြီးမားတဲ့ အိုင်ဒီယာဆိုတာ အမြဲတမ်းတွေးခေါ်နေတတ်တဲ့ လူတွေဆီကပဲ ထွက်လာ
တတ်ပါတယ်။ စံနှုန်းတစ်ခုကို စိန်ခေါ်ရင်ဆိုင်ဖို့ အမြဲအသင့်ရှိသူနေပေါ့။ အတွင်းထဲထိနက်နက် ရှိုင်းရှိုင်းမြင်တတ်ဖို့နဲ့ အပြင်ပုံသဏ္ဍာန်လှအောင် ဖန်တီးနိုင်ဖို့ပဲလိုတာပါ။
သူများတွေ မမြင်နိုင်တဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံကနေကြည့်ပြီး ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါ
ပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ ဒီလိုစူးရှတဲ့ အမြင်မျိုးဆိုတာ မွေးတည်းက ပါလာတဲ့အရာတော့
မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထက်သန်မှုနဲ့ လေ့လာမှုစွမ်းရည်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။
များများတွေးခေါ်နိုင်ပြီး အိုင်ဒီယာကောင်းတွေ ဖော်ထုတ်ကာ အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေ။
အလုပျအငျတာဗြုးတဈခုမှာ ကြှနျတေျာ့ကို ဉာဏျစမျးမေးခှနျးတဈခု မေးတယျ။ တျောတျောလေး ဖွရေခကျတဲ့ မေးခှနျးတဈခုပါ။
မုနျတိုငျးထနျတဲ့တဈနမှေ့ာ မငျးကားမောငျးသှားနရေငျး လူသုံးယောကျ ကားမှတျတိုငျမှာ
မတျတပျရပျနတောကို တှမေ့ယျ။ ပထမတဈယောကျက အရမျးလှတဲ့ မိနျးကလေး ။
ဒုတိယတဈယောကျက မငျးအသကျကိုတဈခါကယျပေးခဲ့ဖူးတဲ့ သူငယျခငျြးဟောငျး။
တတိယတဈယောကျကတော့ နမေကောငျးတဲ့ အဘှားအိုကွီးတဈယောကျ။
မငျးရဲ့ကားကလညျး လူတဈယောကျပဲထပျတငျလို့ရတော့မယျ။ ဘယျသူ့ကို မငျးကားပျေါ
ဒီအငျတာဗြူးမေးခှနျးဟာ ကိုယျ့ကငျြ့တရားနဲ့ပတျသတျတဲ့ ဘေးကပျြနံကပျြမေးခှနျးမြိုးပါ။ စာဖတျသူတို့ဆိုရငျရော ဘယျသူ့ကိုရှေးမှာလဲ ?
အဘှားအိုကို ရှေးသငျ့တယျလို့ထငျလား… အဘှားက တျောတျောလညျးနမေကောငျးဖွဈနတေယျ။ သူမကိုအရငျဆုံး ကယျသငျ့တယျလို့မထငျဘူးလား ?
သူငယျခငျြးဟောငျးကိုရော …. လူ့ဘဝကွီးမှာဆကျလကျရှငျသနျဖို့ မငျးကိုကယျတငျခဲ့တဲ့ သူငယျခငျြးတဈယောကျကိုပွနျပွီး ကြေးဇူးမဆပျခငျြဘူးလား ?
ဒီရှေးခယျြစရာ နှဈခုကွောငျ့ မိနျးမလှလေးကို မငျးထားခဲ့ရတော့မှာ သခြောသှားပွီ။
သူကတော့ ရိုးရိုးလေးပဲဖွလေိုကျပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြးကို ကားသော့ပေးပွီး အဘှားကိုဆေးရုံလိုကျပို့ခိုငျးလိုကျမယျ။ မိနျးမလှလေးနဲ့အတူ ကြှနျတျောကားမှတျတိုငျမှာ အတူစောငျ့ပေးနလေိကျမှာပေါ့တဲ့။ သူ့အဖွကေ အငျတာဗြုးသူတှကေို စိတျကနြေပျစခေဲ့တယျ။
ဒီမေးခှနျးနဲ့အဖွလေေးဟာ လူတျောတျောမြားမြားဆီကို ပြံနှံ့သှားခဲ့ပါတယျ။ အဖွပေေး
လိုကျတဲ့ လူရဲ့ဉာဏျရညျကိုလညျး သဘောကသြှားကွတယျ။
” လူတိုငျးဟာ အောငျမွငျနိုငျဖို့ ကိုယျစီ ကိုယျရညျကိုယျသှေးနဲ့ မှေးဖှားလာကွတာပါ။ လုပျငနျးတဈခုကို စှမျးဆောငျနိုငျဖို့လညျး အရညျခငျြးတှဖေနျတီးနိုငျပါတယျ ”
ကွီးမားတဲ့ အိုငျဒီယာဆိုတာ အမွဲတမျးတှေးချေါနတေတျတဲ့ လူတှဆေီကပဲ ထှကျလာ
တတျပါတယျ။ စံနှုနျးတဈခုကို စိနျချေါရငျဆိုငျဖို့ အမွဲအသငျ့ရှိသူနပေေါ့။ အတှငျးထဲထိနကျနကျ ရှိုငျးရှိုငျးမွငျတတျဖို့နဲ့ အပွငျပုံသဏ်ဍာနျလှအောငျ ဖနျတီးနိုငျဖို့ပဲလိုတာပါ။
သူမြားတှေ မမွငျနိုငျတဲ့ ဘကျပေါငျးစုံကနကွေညျ့ပွီး ပွဿနာတဈခုကိုဖွရှေငျးတဲ့အခါ
ပိုပွီးလှယျကူပါတယျ။ ဒီလိုစူးရှတဲ့ အမွငျမြိုးဆိုတာ မှေးတညျးက ပါလာတဲ့အရာတော့
မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့စိတျထကျသနျမှုနဲ့ လလေ့ာမှုစှမျးရညျနဲ့ပဲ ဆိုငျပါတယျ။
မြားမြားတှေးချေါနိုငျပွီး အိုငျဒီယာကောငျးတှေ ဖျောထုတျကာ အောငျမွငျနိုငျကွပါစေ။
YBS ကားစီးရင် စိတ်စနိုးစနောင့်ဖြစ်စရာ မွစိမွစိအရာလေးများ